YEYINTNGE(CANADA): Wednesday, May 28
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံရသည့် ဧရာဝတီတိုင်းတွင် လူသောင်းနဲ့ချီသေ၊ သောင်းနဲ့ချီ ပျောက်ဆုံး နေခြင်းသည် စင်စစ် အမျိုးသားရေး ပြဿနာကြီးဖြစ်၏။
ထိုမျှကြီးမားသည့် ကပ်ဆိုးကို လျစ်လျူရှုပြီး အခြေခံဥပဒေမူကြမ်း အတည်ပြုရေးကို ဇွတ်တရွတ် လုပ်မည့် စစ်အစိုးရလုပ်ရပ်မှာ သမိုင်းတွင်အောင် ရှက်ရမည့် ကိစ္စကြီးဖြစ်၏။ နိုင်ငံတကာ လက်ညှိုး ထိုးစရာ ဖြစ်လာ၏။ ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက်သေသေ စစ်အစိုးရအဖို့ အာဏာစက် တည်မြဲရေး
သာ အဓိကဆိုသည်မှာ ပေါ်လွင်နေ၏။
နိုင်ငံတကာ အကူအညီလိုသည်ဟု စစ်အစိုးရ ထုတ်ပြောရသည်ကိုကြည့်လျှင် မြန်မာစစ်အစိုးရ ကိုယ်တိုင် နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်းကိစ္စကို မဖြေရှင်းနိုင်သည့် သဘောဖြစ်၏။
သို့သော် တဘက်က နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးမည့် အဖွဲ့တွေကို ဗီဇာထုတ်မပေးဘဲ ဆိုင်း ထားသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ဒေသရှိ ပြည်သူတွေအတွက် သောက်ရေ၊ ဆေးဝါး၊ အစားအစာ လိုသည် မှန်၏။ သို့သော် မည်မျှ အတိုင်းအတာထိ ပျက်စီးသည်ဆိုသည့်အချက်မှာ အကူအညီပေးမည့် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့တွေ သိရမည့် အချက်ဖြစ်၏။ ထိုအချက်ကို စစ်အစိုးရက မထုတ်ပြန်နိုင်။ မည်မျှ အတိုင်းအတာထိ ပျက်စီးသည်ဆိုသည့် အချက်ကို သိမှ မည်သို့ ကူညီရမည်၊ မည်မျှ ကုန်ကျမည်၊ မည်သည့် အတိုင်းအတာထိ ကူညီရမည် စသည့်အချက်တွေကို တွက်ချက်ရမှာဖြစ်၏။ မြန်မာနိုင်ငံ
က မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်တွေအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကမျှ အကန့်အသတ်မရှိ လေထဲက ကြဲချ ကူညီနိုင်ဖို့ မဖြစ်နိုင်။
မည်မျှအတိုင်းအတာထိ ပျက်စီးသည် ဆိုသည့်အချက်ကို စစ်အစိုးရက မထုတ်ပြန်နိုင်လျှင် နိုင်ငံ တကာအဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင် လေ့လာ တိုင်းတာနိုင်၏။ သို့သော် စစ်အစိုးရက ဗီဇာထုတ်မပေးဘဲ တမင်အချိန်ဆွဲထားသည်။ နိုင်ငံတကာ သတင်းထောက်တွေကိုလည်း ပြည်ဝင်ခွင့် ငြင်းထားသည်။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးမည့် အဖွဲ့အတော်များများ ဘန်ကောက်တွင် သောင်တင်နေသည်။
အဖြေမှာ ရှင်းသည်။ မေ (၁၀) ရက်မတိုင်ခင် နိုင်ငံတကာအကူအညီပေးမည့် အဖွဲ့တွေ တတ်နိုင်
သမျှ မြန်မာနိုင်ငံထဲ မ၀င်နိုင်အောင် အချိန်ဆွဲထားဖို့ ဖြစ်သည်ဟု အတိုက်အခံဘက်က ယူဆ၏။ နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးမည့် အဖွဲ့တွေ နိုင်ငံခြားသားတွေ ဆန္ဒခံယူပွဲ မတိုင်ခင် ၀င်လာလျှင် ဆန္ဒခံယူပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိမိတို့ လိမ်သမျှ ပေါ်သွားနိုင်သည်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ယူဆထား ပုံရ၏။ ထို့ကြောင့် ဧရာဝတီတိုင်းက ပြည်သူတွေ ဘယ်လောက် သောင်းနဲ့ချီသေသေ၊ သန်းနဲ့ချီ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ဖြစ် ဆန္ဒခံယူပွဲကို အထိမခံနိုင်ခြင်းဖြစ်၏။ ရဟန်းသံဃာကိုပင် သတ်ရဲ ဖြတ်ရဲသည့် စစ်အစိုးရအဖို့ လူသောင်းနဲ့ သိန်းနဲ့ချီသေတာ ဂရုမစိုက်သည်မှာ အံ့သြစရာတော့ မဟုတ်ပါ။
မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ သာမန်အချိန်တွင် အလုပ်မရှိ အလုပ်ရှာပြီး ဘုရားတကာ လှည့်ဖူး
သည်ကို စစ်အစိုးရ မီဒီယာတွေက သတင်းမဟုတ်တာ သတင်းလုပ်ထည့်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်
ဧရာဝတီတိုင်းတွင် လူပေါင်း သောင်းနဲ့ချီသေ၊ သောင်းနဲ့ချီ ပျောက်ဆုံးသည်ထိ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ် သင့်ချိန်တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကိုယ်တိုင် ရောက်လာပြီး လူထုကို အားပေးသွားသည်ဟု မကြားရ။ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေး ချက်ချင်းလာသွားသည်ဟု ပြည်သူတွေ မသိရ။ ဧရာဝတီ
တိုင်းတွင် ထိုမျှကြီးမားသည့် သဘာဝ ဘေးဆိုးကြီးကြောင့် လူပေါင်း သိန်းသန်းချီ ဒုက္ခရောက် သည်ကို မိမိတို့ အလုပ်မဟုတ်ဟု စစ်ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောထားပုံမှာ စံတင်လောက်၏။ လူထုဘက်က စိတ်နာမည်ဆို နာကြည်းထိုက်၏။
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စပါးကျီဖြစ်၏။ ဧရာဝတီတိုင်း မုန်တိုင်းဒုက္ခ သည်တွေကို အခြေခံလိုအပ်သည့် အကူအညီပေးနိုင်သည်ဆိုသည့်တိုင် လာမည့် (၆) လအတွင်း စပါးအထွက် မည်မျှထိခိုက်မည်၊ ဆန်ဈေး မည်မျှ ထောင်တက်သွားနိုင်သည်၊ ပြည်တွင်းစားသုံးမှု မည်မျှ ထိခိုက်နိုင်မည်၊ သို့ဖြစ်၍ ရေဒဏ်သင့် စပါးကွင်းတွေ လယ်သမားတွေအတွက် မည်မျှ မြန်မြန်ဆန်ဆန် အကူအညီပေးသင့်သည် စသည်တို့ကို စစ်အစိုးရဘက်က နားလည်သင့်၏။ လယ်သမား၊ ဆန်ကုန်သည်တွေအပြင် တတ်ကျွမ်းနားလည်သူတွေနှင့် အမြန်တိုင်ပင် စဉ်းစား အဖြေရှာသင့်၏။
ထို့ကြောင့် မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ဧရာဝတီတိုင်းအရေးသည် ဧရာဝတီတိုင်းအရေး သက်သက်မဟုတ်၊ မြန်မာတပြည်လုံး အရေးဖြစ်၏။ မြန်မာပြည် စီးပွားရေး ထိခိုက်သွားနိုင်သည့် အရေးဖြစ်၏။ မြန်မာ ပြည်သူတရပ်လုံး၏ စားဝတ်နေရေး ထိခိုက်သွားနိုင်သည့် အရေးဖြစ်၏။ တပြည်လုံး လူမှုရေး အုံကြွမှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်သည့် အရေးဖြစ်၏။ ဧရာဝတီတိုင်း နာလန်ထူမည့် အရေးသည် ရက်ပိုင်း လပိုင်းနှင့် အပ်ချလောင်းလုပ် မန်းမှုတ်၍ ရသည့် အရေးမျိုးမဟုတ်။
မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူတွေအရေးကို နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေနှင့် ပူးပေါင်းပြီး ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မလား၊ စစ်တပ်အကျိုးစီးပွားအတွက် ရေးဆွဲထားသည့် ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဦးစား ပေးမလား မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်တွေ ဆုံးဖြတ်ရမည့် အချိန်ဖြစ်၏။
ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဘေးချိတ်ပြီး မုန်တိုင်းဒဏ်သင့် ပြည်သူတွေအရေးသက်သက်ကို ဦးစားပေးလျှင် စစ်အစိုးရ မျက်နှာကောင်းရနိုင်၏။ ဆန္ဒခံယူပွဲကို ဦးစားပေးလျှင် အနှေးနှင့်အမြန် လူမှုရေး အုံကြွမှု တွေနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်၏။ နှစ်မျိုးလုံးတပြိုင်တည်း အကောင်အထည်ဖော်လျှင်လည်း လူထုမကျေနပ်
မှု ပိုကြီးမားအောင် မီးထိုးပေးသည်နှင့်တူ၏။ စစ်အစိုးရ အာဃာတနှင့် ပြည်သူတို့၏ ဒေါသ ပေါင်း
ဆုံဖို့ မဝေးတော့ပြီဟု ခေတ်ပြိုင်က ယူဆ၏။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 5/28/20080အကြံပြုခြင်း
အဂတိကြောင့် ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှုဖြစ်
NEJ/ ၂၈ မေ ၂၀၀၈
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှုတွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန (၂) ခုရှိ စာရွက်စာတမ်းများသာ ကွက်ပြီး လောင်သွားသည့်အတွက် သံရုံးတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် ပတ်သက်နိုင်သည်ဟု နေပြည်တော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှုကို ၀ါယာလျှော့ဖြစ်၍ လောင်သည်ဟု သံရုံးအရာရှိတဦးက ပြောသော်လည်း ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန (၂) ခုရှိ စာရွက်စာတမ်းများသာ ကွက်ပြီး မီးလောင်ခြင်းကြောင့် သံရုံးတွင်း အဂတိလိုက်စားမှုများကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ရန် ရှို့မီးဖြစ်နိုင်သည် ဟု ဘန်ကောက်သံရုံးနှင့် နီးစပ်သည့် သတင်းရပ်ကွက်ကလည်း ခေတ်ပြိုင်ကို ပြောသည်။
ဘန်ကောက်မြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မကြာခင် စသုံးလုံးနှင့် သီးခြား ထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့များ၊ စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံးတို့မှ လာရောက် စစ်ဆေးတော့မည်ဖြစ်ဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကို ဗီဇာထုတ်ပေးမှု နှောင့်နှေးသည့်အတွက် ဘန်ကောက် မြန်မာသံရုံးကို နိုင်ငံတကာက အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် ယခုကဲ့သို့ မီးလောင်မှုဖြစ်သည့်အတွက် အမှုကို ၀န်ကြီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် ကိုင်တွယ်ရန်များသည်ဟု စုံစမ်းသိရသည်။
နိုင်ငံခြား မြန်မာသံရုံး အတော်များများတွင် အဂတိလိုက်စားမှုများနှင့် ရှုပ်ထွေးနေသည့်အတွက် ၂၀၀၆ ခုနှစ် မလေးရှား မြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှုနောက်ပိုင်း မြန်မာသံရုံးမီးလောင်မှုများ ခေတ်စား လာခြင်းဖြစ်သည်ဟုပါ အဆိုပါ သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။ မလေးရှားသံရုံး မီးလောင်မှု၌ ကွယ်လွန်သူ ၀န်ကြီးချုပ် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဂျပန်ရှိ မြန်မာသံရုံးဆိုလျှင် မြန်မာသံတမန်တဦး၏ လက်မှတ်တခါ ထိုးရန်အတွက်ပင် ဂျပန် ယန်းငွေ (၈) ထောင်ထိ သံရုံးက တောင်းသည့်အတွက် လက်မှတ်တကြိမ်ထက်မက ထိုးရမည့် ဥပမာ-မင်္ဂလာဆောင်ကဲ့သို့ ကိစ္စမျိုးအတွက် ပြည်ပရောက် မြန်မာများ ယန်းသောင်းနှင့် ချီပေး နေရသည်။
မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးမှ သံအမတ်ကတော်ဆိုလျှင် သံရုံးတွင်း ငွေကြေးကိစ္စများ၌
၀င်ရောက်စွက်ဖက်သူအဖြစ် နာမည်ထွက်နေသလို ဂျာမနီ မြန်မာသံအမတ် ဗိုလ်မှူးကြီး
တင်ဝင်းမှာလည်း အဂတိလိုက်စားမှု များသည်ဟု မြန်မာသံရုံးလောကတွင် လူသိများသူ တဦးဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ မြန်မာသံအမတ် ဗိုလ်မှူးကြီးတင်ဝင်း၏ သမီးဆိုလျှင် ဂျာမန်မြန်မာ အတိုက်အခံဘက်မှ ပုဂ္ဂိုလ်တချို့နှင့်ပင် အပြင်မှာ သွားသွားလာလာ ရှိနေသည်ဟု မျက်မြင် သက်သေများက ပြောသည်။
ယခုအချိန်သည် နိုင်ငံခြား မြန်မာသံအမတ်များကို အပြောင်းအရွှေ့လုပ်လေ့ရှိသည့် အချိန်ဖြစ် သော်လည်း နာဂစ်မုန်တိုင်းကြောင့် အပြောင်းအရွှေ့များကို စစ်အစိုးရဘက်က မကိုင်နိုင်ဖြစ် နေသည်။ စစ်အစိုးရ၏ ထိုဟာကွက်သည် အဂတိလိုက်စားသည့် မြန်မာသံအမတ်များအတွက် အခွင့်ကောင်း ဖြစ်နေပုံရသည်ဟု နေပြည်တော်အရာရှိတဦးကလည်း ပြောသည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် မလေးရှားမြန်မာသံရုံးမီးလောင်မှုဖြစ်ပြီး မကြာခင် မြန်မာသံတမန် (၄) ဦးကို နေပြည်တော်ပြန်ခေါ်ခဲ့သလို သံအမတ်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်အောင်ကို ရာထူးမှ ဖြုတ်ပစ်ခဲ့သည်။
၂၀၀၆ ခုနှစ် မလေးရှား မြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှုသတင်းဖြစ်စဉ် အကျဉ်းချုပ်
- မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံး မီးလောင်ပြီးနောက် သေဆုံးသူ သံရုံးစာရေး ကိုကျော်ကျော်၏ ရုံးစားပွဲအံဆွဲထဲတွင် ဘဏ်မသွင်းရသေးသည့် မလေးရှားရင်းဂစ်ငွေ ရှစ်သောင်းတွေ့
- ကိုကျော်ကျော်၏ နေအိမ်ကို ရှာဖွေရာတွင် (၃) နှစ်အတွင်း ကိုကျော်ကျော် မြန်မာနိုင်ငံ မိသားစုထံ ပြန်ပို့သည့် မြန်မာငွေ သိန်း (၈၀) ကျော်ဖိုးရှိသည့် ငွေလွှဲအထောက်အထားများ သိမ်းဆည်းမိ
- ကိုကျော်ကျော်နှင့် အထက်အရာရှိ သံတမန်တဦးကို မြန်မာကုမ္ပဏီများ၏ ချက်လက်မှတ်များ ထိန်ချန်မှုဖြင့် အရေးယူရန် ပြင်ဆင်နေစဉ်တွင် ကိုကျော်ကျော်က သံရုံးကို မီးတင်ရှို့ပြီး မီးပုံထဲ ခုန်ချခဲ့ခြင်းဖြစ်
- ထိုအချိန်က မလေးရှားမြန်မာသံရုံး သံအမတ်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ်မြင့်အောင်သည် မလေးရှား
နိုင်ငံရှိ မြန်မာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများနှင့် အရောတ၀င် နေထိုင်သူဖြစ်
- မလေးရှားနိုင်ငံ မြန်မာသံရုံးတွင် ရုံးအကူအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တပ်ကြပ်ကြီး သိန်းကျော် သံရုံး၌ လုပ်နေစဉ် မြန်မာနိုင်ငံမှ မလေးရှား လာချင်သူများထံက ငွေယူပြီး လူသွင်းသည့်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်မှုကြောင့် အလုပ်ပြုတ်
- မလေးရှားမြန်မာသံရုံးအတွင်း ဖြစ်ပျက်နေသည့် ကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သံရုံးဝန်ထမ်းများ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန မတိုင်ရဲအောင် မလေးရှား မြန်မာသံရုံး သံအမတ်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်အောင်က ခြိမ်းခြောက်ခဲ့
- မလေးရှားမြန်မာသံရုံး ဧည့်ခံပွဲ စားသောက်စရိတ်များကို မလေးရှားရောက် မြန်မာစီးပွားရေး သမားများက အကုန်အကျခံလေ့ရှိ
- မလေးရှားမြန်မာသံရုံး မီးလောင်မှု သံရုံးအတွင်း ငွေကြေး အရှုပ်တော်ပုံနှင့် ပတ်သက်ပြီး သံအမှုထမ်း(၄) ဦးကို နေပြည်တော်ပြန်ခေါ်
- မလေးရှားမြန်မာသံရုံး သံအမတ်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် မြင့်အောင်သည် ဒု-ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မောင်အေးနှင့် နီးစပ်သူဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုံး ရာထူးမှ အဖြုတ်ခံရ
၁၈ နှစ်မြောက် ရွေးကောက်ပွဲ နှစ်ပတ်လည်နေ့တွင် ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်သို့ ပါတီရုံးချုပ်မှ လမ်းလျှောက် ချီတက်သွားသည့် ပါတီလူငယ် ၁၈ ဦးကို ယမန်နေ့ နေ့ခင်းပိုင်းတွင် ဖမ်းဆီးပြီးနောက် ညပိုင်းတွင်မူ လူဦးရေ ၃ဝ ခန့်ကို လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“မနေ့ညက ရဲအထူးသတင်း တပ်ဖွဲ့ရယ်၊ နယ်မြေခံရဲရယ်၊ ရယက ရယ်က လာဖမ်းတာ။ ဦးကြည်လွင်ရဲ့ နေအိမ်မှာ လာဖမ်းတယ်၊ တောင်ဒဂုံမှာပါ” ဟု တောင်ဒဂုံ ရဲသတင်း ရပ်ကွက်တခုက ပြောသည်။
အန်အယ်ဒီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဉာဏ်ဝင်းက “အန်ကယ် တခြားမကြားရသေးဘူး။ မနေ့ကတော့ ၁၈ ယောက် ဖမ်းသွားတယ်။ နောက်ထပ်တော့ သတင်းမကြားသေးဘူး။ အခုထိ ပြန်လွတ်လာတာလည်း မရှိသေးဘူး။ အသက် ၁၂ နှစ်အရွယ်ကလေးလည်း ပါသွားတယ်။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာတော့ မသိသေးဘူး။ သူတို့ကို ဘယ်နေရာ ဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
ပါတီလူငယ် ၂၄ ဦးက ရုံးချုပ်ရှေ့တွင် ‘ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ... ချက်ခြင်းလွှတ်၊ ချက်ခြင်းလွှတ်’၊ လေဘေးဒုက္ခသည်များအတွက် ‘နိုင်ငံတကာ အကူအညီ ... ချက်ခြင်းပေး၊ ချက်ခြင်းပေး’ ကြွေးကြော်ပြီးနောက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်တည်ရှိရာ တက္ကသိုလ် ရပ်သာလမ်းသို့ ချီတက်သွားရာ ကမ္ဘာအေးဘုရားအနီး နှင်းဆီကုန်း ဘိုးဘွားရိပ်သာနားတွင် အာဏာပိုင်များက ဒိုင်နာကားများနှင့် တင်ဆောင်ကာ ဖမ်းဆီးသွားခြင်း ဖြစ်သည်။ သူတို့အနက် အချို့မှာ ထွက်ပြေး လွတ်မြောက်သွားသည်။
နေအိမ် အကျယ်ချုပ် သက်တမ်း ၅ ပြည့်ပြီဖြစ်သော လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယမန်နေ့က ၆ လ သက်တမ်း ပြန်တိုးလိုက်ကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်နေသော်လည်း အစိုးရ သတင်းရပ်ကွက် တခုကမူ တနှစ် သက်တမ်းတိုးသည်ဟု ပြောဆိုသည်။ သို့သော်လည်း သီးခြား အတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
ရန်ကုန်။ ။ ဧရာဝတီတိုင်းဘက်သို့ သွားရောက်မည့် လေဘေး အလှူရှင်များ၏ ကားများကို ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းအတွင်း အာဏာပိုင်များက တားဆီးခြင်း၊ အပြန်ကားများကို ယာယီ ထိန်းသိမ်းမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ၂၆ ရက်နေ့ညမှ စတင်ပြီး ကားများကို တားဆီးခြင်း မပြုတော့ပါ။
၂၆ ရက်နေ့တွင် ဖျာပုံမှ ပြန်လာသော အလှူရှင်ကားများ၊ ၂၇ ရက်နေ့တွင် သွားရောက်သော ကားသမားများ အဆိုအရ ဧရာဝတီတိုင်းသို့ သွားရောက်မည့် ကားများကို အလှူပေးရန် သွားလိုက ကားနံပါတ်နှင့် ယဉ်မောင်း အမည်ကို ပြောခဲ့ရပြီး မည်သည့် မြို့နယ်သို့ သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုပါ အသိပေးခဲ့ရသည်။
အလှူပစ္စည်း မပါသော ကားများအနေဖြင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာနိုင်သည်။
ထိုသို့ စာရင်း ကောက်ယူရခြင်း အကြောင်းအရင်းကို အရာရှိတဦးက “ကျနော်တို့ အနေနဲ့က တာဝန်အရ လုပ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ စာရင်း ကောက်တာက အလှူရှင်တွေ ဘယ်လောက်၊ ဘယ်ဒေသကို သွားရောက်တယ် ဆိုတာ သိရအောင်နဲ့ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီတွေကို သက်ဆိုင်ရာက ကူညီလို့ ရတာရှိရင် ကူညီရအောင်ပါ။ နိုင်ငံခြားသားတွေ သွားမယ်ဆိုရင်တော့ တရားဝင် သွားရောက်ခွင့် ပြုတဲ့ စာရွက်စာတမ်း တခုခု ပါလာရင် လွတ်လပ်စွာ သွားရောက်နိုင်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
လှိုင်သာယာဘက်မှတဆင့် တွံတေး၊ ဒေးဒရဲဘက်က သွားသူများ အနေဖြင့် ပန်းလှိုင်တံတား ဂိတ်တခုတည်းသာ စစ်ဆေးမှုရှိပြီး၊ ညောင်တုန်း-မအူပင် လမ်းများမှ သွားရောက်ပါက လှိုင်သာယာ တိုးဂိတ် အကျော်တွင်သာ စစ်ဆေးသည်။
ယနေ့နံနက်တွင် ဖျာပုံမှ ပြန်လာသော အလှူရှင်တဦး အဆိုအရ အပြန်ကားများကို မည်သည့် ဂိတ်ကမှ စစ်ဆေးမှု မရှိကြောင်း သိရသည်။
လှိုင်သာယာ တံတားထိပ်မှ စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ကာ အလှူရှင်ကားများကို ပြန်ခိုင်းသည်ဆိုသော သတင်းများနှင့် အပြန်ကားများကို ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခြင်းများ ရှိခဲ့သဖြင့် ဘိုကလေး၊ လပွတ္တာ၊ ဖျာပုံနှင့် လေဘေးသင့် ပြည်သူများ အများအပြားရှိရာ ဒေသများသို့ ကူညီလိုသော ပြည်တွင်းမှ အလှူရှင်များ အနေဖြင့် မသွားရောက်ဝံ့ဘဲ စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်။ ထို့အတွက် အခက်အခဲ ကြုံနေရသော ဒုက္ခသည်များ အနေဖြင့် အလွန်ပင် ပိုမိုသော ဒုက္ခများကို ဆက်လက် ခံစားရဖွယ် ရှိနေသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဘိုကလေးဘက်သို့ ဖျာပုံမှတဆင့် ၀င်ရောက်လာသော အလှူရှင်ကားများ လုံးဝနီးပါး အသွားအလာ ရပ်ဆိုင်းခဲ့ကြောင်း ဘိုကလေးမြို့ခံ တဦးက ပြောသည်။
ဒုက္ခသည်အလှူအပေါ် မယက မှ ခွဲတမ်း ကောက်နေ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 28 2008 21:15 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ နအဖ ဝန်ကြီးချုပ်မှ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးဆောင်သည့် အမျိုးသား သဘာဝ ကာကွယ်ရေး ဗဟိုကော်မတီ အမည်သုံးကာ ဒေးဒရဲမြို့နယ် အတွင်းရှိ မြို့နယ် မယကရုံးများသည် လေဘေး အလှူရှင်များထံမှ အလှူငွေနှင့် ပစ္စည်းများ၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို အချိုးကျ တောင်းယူနေသည်။
ယမန်နေ့က ဧရာဝတီတိုင်း ဒေးဒရဲမြို့နယ်သို့ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့သည့် INGO အဖွဲ့မှ အလှူရှင်များကို မြို့အဝင်ဝဂိတ်မှ ရဲများက တားဆီးပြီးနောက် အလှူပမာဏာ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ကို မယက ရုံးက ကောက်ခံလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဝေးလံခေါင်းပါးတဲ့ နေရာတွေ၊ အလှူမရနိုင်တဲ့ ဒုက္ခသည်တွေဆီကို မယက အနေနဲ့ ပြန်ဖြန့်ဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြီး ယူတာပါ” ဟု လေဘေး ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ဆောင်နေသူ တဦးက ပြောသည်။
မေလ ၃ ရက်နေ့မှစတင်ကာ အမျိုးသား သဘာဝ ကာကွယ်ရေး ဗဟိုကော်မတီကို နအဖ ဝန်ကြီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသိန်းစိန် ဦးဆောင်ဖွဲ့စည်းကာ လေဘေးဒုက္ခသည်များ ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု အစိုးရပိုင် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြနေပြီး နယ်မြို့များရှိ မယက ရုံးများက အဆိုပါ ကော်မတီ နာမည်သုံးကာ အလှူရှင်များထံမှ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် အချိုးကျ တောင်းယူနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ယနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် အလှူရှင်များကို တဦးချင်းသော်လည်းကောင်း၊ အစုလိုက် သော်လည်းကောင်း သွားရောက်လိုသည့် နေရာဒေသသို့ စနစ်တကျသွားရောက် လှူဒါန်းခွင့်ပြုပြီး အကူအညီလိုပါကာ ကော်မတီမှ လိုက်လံ ကူညီမည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အမျိုးသား သဘာဝကာကွယ်ရေး ကော်မတီက ဧရာဝတီတိုင်း ဘိုကလေး၊ ဖျာပုံ၊ လပွတ္တာ၊ ဒေးဒရဲနှင့် ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်တွင် တမြို့နယ်လျှင် ဝန်ကြီး တဦးကျ အထက်မှ ချုပ်ကိုင်ကာ ကော်မတီ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များအဖြစ် မယကရုံးများမှတဆင့် ကိုင်တွယ် လုပ်ဆောင်နေပြီး အလှူရှင်များထံမှ ရာခိုင်နှုန်းအလိုက် ရရှိသည့် ငွေနှင့် ပစ္စည်းများကို လေဘေးဒုက္ခသည်များထံသို့ အနည်းငယ်သာ ပြန်လည် မျှဝေနေသည်။
ဒေးဒရဲမြို့နယ် မယကရုံးသည် စေတနာရှင်များထံမှ အတင်းအဓမ္မ ကောက်ယူထားသည့် ငွေနှင့် ပစ္စည်း များစွာ ရှိနေသော်လည်း ဒုက္ခသည်များကို ဆန်နို့ဆီဗူး ၂ ဗူးသာ ဝေပေးနေသည်ဟု ဒေသခံများက ဆိုသည်။
အိမ်ရှင်မ မရှိတော့သည့် ကလေး ၃ ဦး၏ ဖခင်ဖြစ်သူက “ကျနော်က ဒီကလေးတွေကို မကျွေးနိုင်တော့ဘူး၊ ကလေးတွေကို သတ်ပစ်ဖို့ပဲ ရှိတော့တယ်လို့ သွားပြောမှ မယက က ဆန် ၁ဝ ပြည် ပေးလိုက်တယ်” ဟု ပြောသည်။
ဒုက္ခသည် ကယ်ဆယ်ရေး ကာလအတွင်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ပိုမိုနှိပ်စက်ခံရ
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ မေလ 28 2008 21:11 - မြန်မာစံတော်ချိန်
နယူးဒေလီ။ ။ နာဂစ်နောက်ပိုင်း ကယ်ဆယ်ရေးကို နိုင်ငံတကာက ပိုမို အာရုံစိုက်နေချိန်တွင် အခြားတဖက်၌ အကျဉ်းထောင်ထဲရှိ အမေ့ခံ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများမှာ ထောင်အာဏာပိုင်များ၏ ညှဉ်းပမ်းနှိပ်စက်မှုများ ပိုခံလာကြရသည်ဟု နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ) - အေအေပီပီက ဆိုသည်။
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ပြည်သူများအတွက် ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကိုသာ အာရုံထားနေချိန် အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများမှာ မတရား ရိုက်နှက်ခံရခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခွင့်နှင့် ထောင်ဝင်စာ ပိတ်ပင်ခံရခြင်းများ ခံနေရသည်ဟု ယမန်နေ့က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နာဂစ်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း နိုင်ငံတကာ အဝန်းအဝိုင်းက အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ အစိုးရတွေက ကယ်ဆယ်ရေးဘက်ကိုပဲ အာရုံထားပြီးတော့ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေဘက်ကို အာရုံပြုမှု နည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့မှာ ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ နှိပ်စက်မှုတွေကို ပိုခံနေရပါတယ်” ဟု ထိုင်းအခြေစိုက် အေအေပီပီ အတွင်းရေးမှူး ဦးတိတ်နိုင်က ပြောသည်။
ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာပြည်သို့ လာရောက်စဉ် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် ပတ်သက်၍ တစုံတရာ ပြောဆိုခဲ့ခြင်း မရှိသည်မှာလည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ အရေးကို အလေးမထားသည့် သဘောသက်ရောက်ခဲ့သည်ဟု သူက ပြောသည်။
“ဒါက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အလေးမထားတဲ့ သဘော သက်ရောက်သွားတယ်။ အဲဒီတော့ အာဏာပိုင်တွေက နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ကိုင်တွယ်မှုက ပိုပြင်းထန်လာတယ်။ နှိပ်စက် ညှဉ်းပမ်းမှုက ပိုများလာတယ်” ဟု ဦးတိတ်နိုင်က ပြောသည်။
အေအေပီပီ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင် ယခုလ ၁ဝ ရက်နေ့က အင်းစိန်ထောင် အဆောင် ၅ ရှိ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ဦးတင်မြ၊ ဦးမြင့်ထွန်း၊ ကိုသန့်ဇော်၊ ဦးကျော်၊ အရှင်ဓမ္မိက (ခ) ဦးထွန်းထွန်းတို့ကို ထောင်အာဏာပိုင်များက အလုပ်ခိုင်းရာ ငြင်းဆန်သဖြင့်ဟု ဆိုကာ ခေါင်းစွပ် စွပ်ကာ ရိုက်နှက်ခဲ့ပြီး ၁ဝ ရက်တိတိ ခြေကျင်းခတ်ကာ တိုက်ပိတ်ခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
ယခုလ ၃ ရက်နေ့ နံနက်က အင်းစိန်ထောင်၌ မီးလောင်မှု ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်း အာဏာပိုင်များက သာမန် အကျဉ်းသားများနှင့်အတူ နိုင်ငံရေးသမားများကို ပိုမို တင်းကျပ်စွာ ချုပ်ချယ်လာသည်ဟု သိရသည်။
“အထဲမှာ တော်တော်လေး အခြေအနေ ဆိုးနေတယ်။ မုန်တိုင်းဖြစ်တဲ့ည ထောင်မီးလောင်တဲ့ ကိစ္စနောက်ပိုင်း ဆေးလိပ်သောက်တာ မိတဲ့ ဘယ်သူမဆို ၆ လ ပြစ်ဒဏ်တိုးမယ်၊ ၃ လ ထောင်ဝင်စာ ပိတ်မယ်ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာတယ်” ဟု NLD လူငယ်သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့ဝင်တဦးက ပြောသည်။
အင်းစိန်ထောင် အဆောင် ၁ မီးလောင်မှုတွင် အာဏာပိုင်များ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် အကျဉ်းသား ၃၆ ဦး သေခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ကိုအုန်းကျော်မှာလည်း ထောင်ဖောက်ရန် ကြိုးစားမှုဖြင့် အာဏာပိုင်များက စစ်ဆေးစဉ် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
အင်းစိန်ထောင်အတွင်းရှိ အမျိုးသမီးဆောင် အတွင်း၌လည်း သောက်သုံးရေ မသန့်ရှင်းမှုကြောင့် အရေပြားဆိုင်ရာ ရောဂါများနှင့် အခြား ရောဂါများ ပြန့်ပွားနေပြီး အမျိုးသမီး နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများမှာ အာဏာပိုင်များ၏ စနစ်တကျ ဆေးဝါးကုသမှုကို မခံရဘဲ ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဆိုးနေသည်ဟု အေအေပီပီက ပြောထားသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်း ခန္တီးထောင်တွင် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂ဝ တဖြစ်လဲ ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်း ကျခံနေရသူ ဦးအုန်းသန်းမှာလည်း အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲ တိုက်ပိတ်ခံနေရစဉ် ငှက်ဖျားပိုး ဦးနှောက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားသဖြင့် အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်နေရသည့် အခြေအနေ ရှိနေသည်ဟု မဇ္ဈိမက သတင်း ရရှိထားသည်။
“ခန္တီးထောင်တို့၊ ကလေးထောင်တို့ ဆိုတာ တကယ့်ကို ရာသီဥတု ဆိုးဝါးပြီးတော့ ငှက်ဖျားရောဂါ ကူးစက်လွယ်တဲ့ နေရာတွေဖြစ်တယ်။ တစိမ်းတယောက် သွားမယ်ဆိုရင် ငှက်ဖျားရောဂါဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေမျိုးမှာ ဦးအုန်းသန်းကို အညိုးတကြီးနဲ့ ခန္တီးထောင်ကို ပြောင်းပေးတာဖြစ်တယ်” ဟု ဦးတိတ်နိုင်က ပြောသည်။
အကျဉ်းထောင် လက်စွဲဥပဒေအရ အကျဉ်းသားများကို ၎င်းတို့၏ နေရပ်များနှင့် အနီးဆုံးထောင်၌သာ ထားရမည်ဟု ဖော်ပြထားသော်လည်း အစိုးရက ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ကာ ရန်ကုန်မှ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများကို ခန္တီးထောင်၊ မြစ်ကြီးနားထောင်၊ ပူတာအိုထောင် စသည်တို့ကို ပြောင်းရွှေ့ပေးခြင်းဖြင့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုကို နှိပ်စက်နေသည်ဟု အတိုက်အခံများကလည်း ဝေဖန်ကြသည်။
မြန်မာပြည်တဝှမ်းရှိ အကျဉ်းထောင်များတွင် အကျဉ်း ချခံနေရသည့် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားပေါင်း ၁၉ဝဝ ကျော် ရှိနေသေးသည်ဟု အေအေပီပီ ၏ စာရင်းအရ သိရသည်။
၂ ရက်နေ့ညက တိုက်ခတ်ခဲ့သော နာဂစ်မုန်တိုင်း နောက်ပိုင်း သိန်းနှင့်ချီသော ပြည်သူများ၏ အသက်ကို ကယ်ဆယ်ရန်အတွက် အာရုံစိုက် ကြိုးပမ်းနေသော ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ အနေဖြင့် အကျဉ်းထောင်များရှိ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ အခြေအနေကိုလည်း တစေ့တစောင်း အကဲခတ် စောင့်ကြည့်ပေးကြပါရန်လည်း အေအေပီပီက တောင်းဆိုထားသည်။
ဒေါ်စု ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခြင်း ကုလ အတွင်းရေးမှူးချုပ် စိတ်မကောင်းဖြစ်
စုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချထားမှု ဆဋ္ဌမ
နှစ် သက်တမ်းတိုးဖို့ စစ်အစိုးရက ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့
အတွက် အကြီးအကျယ် စိတ်အနှောင့်အယှက်
ဖြစ်ရတယ်လို့ အမေရိကန်သမ္မတ ဂျော့ခ်ျဘုရှ်
(George Bush) က ပြောပါတယ်။
အသက် ၆၂ နှစ်အရွယ်ရှိ မြန်မာ့အတိုက်အခံ
ခေါင်းဆောင်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၈ နှစ်တာကာလ
အတွင်း ၁၂ နှစ်ကျော် နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ချခံ
အားလုံး လွှတ်ပေးပါ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ သူမရဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊
တခြားသော ဒီမိုကရေစီအင်အားစုများ၊ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ နိုင်ငံရေး
စကားဆိုပါလို့ သမ္မတအိမ်ဖြူတော်က စစ်အစိုးရကို အင်္ဂါနေ့က တိုက်တွန်းလိုက်ပါ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားမှု သက်တမ်းတိုးခြင်းဟာ
မြန်မာပြည်က နိုင်ငံရေးလွတ်လပ်ခွင့်အတွက် ၀မ်းနည်းစရာတရပ်ဖြစ်တယ်၊ ဒါပေ
မယ့် ဆိုင်ကလုံးလေပြင်းမုန်တိုင်းဒဏ် ခံလိုက်ရတဲ့ ဒုက္ခသည်များအတွက် ကယ်ဆယ် ထောက်ပံ့ရေးကိုတော့ ထိခိုက်စေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာန
မြန်မာစစ်အစိုးရ တာဝန်ခံများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နေအိမ်သို့ မနေ့က
သွားရောက်ပြီးနောက် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်ချထားမှု သက်တမ်းတိုးကြောင်း အသိပေး ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။
ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း (Ban Ki-moon) က ဒေါ်အောင်ဆန်းစု
ကြည်ရဲ့အမှုက နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းအဖို့ အလွန်အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ အကြီး
အကျယ်စိုးရိမ်ရတဲ့ အမှုတွေထဲမှာ တခုအပါအ၀င်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုပြီး
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တခြား နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံး စောနိုင်သမျှစောပြီး လွတ်လာကြတာကို မြင်တွေ့ရရေး ကုလသမဂ္ဂက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်
လို့လည်း ကတိပြု ပြောဆိုသွားပါတယ်။
မြန်မာစစ်အစိုးရအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေနဲ့ တွေ့ဆုံစဉ် ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည်ရဲ့ အမှုကိစ္စကို ထည့်သွင်းဆွေးနွေးခြင်း မပြုခဲ့ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ သူ မြန်မာပြည်ကိုသွားရောက်တာဟာ နာဂစ်ဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်း ဘေးသင့်ခံရတဲ့အတွက် ကူညီဖို့ကိစ္စဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးကိစ္စမဟုတ်လို့ ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမပြုတာလို့ ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ်က ရှင်းပြပြောဆိုပါတယ်။
လေဘေးအလှူ့ရှင်များ အပေါ် စစ်အစိုးရ လေသံပျော့
နိုင်ငံတကာ အကူအညီပေး လုပ်သားတွေ အပေါ် ရပ်တည်ချက် လေသံ ပျော့သွားပြီး၊ နိုင်ငံတော်ပိုင် မီဒီယာတွေက ကူညီသူတွေဟာ မုန်တိုင်းသင့် ဘယ်ဒေသကို မဆို သွားနိုင်ပါတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက အလှူရှင်တွေ ဟာလည်း ဧရာဝတီတိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပေါ် ဒေသက မုန်တိုင်းဒဏ် ခံရသူတွေကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာ လှူဒန်း ကူညီနိုင်တယ်လို့ မြန်မာ့ အလင်းသတင်းစာက ဆိုပါတယ်။ အရင်တုံးကတော့ အာဏာပိုင်တွေ က အဲဒီ ဒေသကို မသွားဖို့ တားခဲ့ကြပါတယ်။
ကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းတွေကို ကိုင်တွယ်ရာမှာ အစိုးရက သူပဲ လုပ်မယ်လို့ ပြောနေခဲ့တာကြောင့် သန်းပေါင်းများစွာသော ဒုက္ခရောက်နေသူတွေ အတွက် အများကြီး လိုအပ်နေတဲ့ အကူအညီပေးရေးဟာ နှေးကွေးခဲ့ရပါတယ်။
အရင်အပတ်က ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ် ဘန်ကီမွန်း မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်ပြီး နိုင်ငံခြား အကူအညီကို ဘယ်လို အခြေအနေမှ မကန့်သတ်ဘဲ ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတဲ့ ကတိ အစိုးရဆီက ရရှိကတည်းက မုန်တိုင်းသင့်ဒေသကို သွားရောက်နိုင်တာ တိုးတက်မှု ရှိလာခဲ့ပါတယ်လို့ ကယ်ဆယ်ရေး ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတွေက ပြောပါတယ်။
မုန်တိုင်းသင့် ပြည်သူတွေကို အကူအညီပေးမယ့် ပစ္စည်းတွေ တင်ထားတဲ့ ပြင်သစ် ရေတပ် သဘောင်္ဟာ စစ်အစိုးရက နိုင်ငံခြား စစ်သဘောင်္ နဲ့ စစ်သားတွေ လက်မခံတဲ့အတွက်၊ ထိုင်းနိုင်ငံ ဖူးခက်မှာ သွားပြီး၊ ဗုဒ္ဒဟူးနေ့က ပစ္စည်းချပါတယ်။
ဘုရ်ှက ဆိုပါတယ်။အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေး
YANGON, May 28 (Xinhua) -- The Myanmar authorities said it would allow direct personal donation right down to specific persons and regions in cyclone-hit areas, advising donors to seek assistance from the National Disaster Preparedness Committee (NDPC), according to the state newspaper New Light of Myanmar Wednesday.
"Individuals and organizations wishing to do so may go right down to the storm-hit towns, wards and villages of their choice so that the donation operation can be carried out more effectively," said an announcement of the committee, "In that regard, assistance may be sought from the NDPC at different levels".
The announcement came amid local-reported complaints fromalarge number of such individual or group donors that their personal or group donated relief supplies were blocked on the way to reach up to the hands of victims whom they wish to donate and were turned back after they failed to produce permit for the emergency life-saving humanitarian assistance or were deemed as not distributing inasystematic way.
Myanmar has claimed thatatotal of 5,276.42 tons of aid supplies out of 6,632.052 tons from home and abroad have been delivered to cyclone-hit areas in the country as of last week after the disaster hit the country early this month.
Myanmar obtained 5,422.974 tons of foodstuff, consumers goods and construction materials from local donors for storm victims, while it received 1,209.078 tons of aid supplies sent from abroad for them.
These aid materials have been transported to 21 cyclone-affected townships in southwestern Ayeyawaddy division and three such townships in Yangon division.
MEE LAUNG KWIN, Myanmar — As the fisherman sat mending cyclone-damaged nets in his riverside hut here on Saturday, he said he had not known it was the day he and other residents of the Irrawaddy Delta were supposed to vote on the new military-backed Constitution.But the fisherman, 54, did remember thatavillage leader affiliated with the ruling junta told him and his neighborsafew days earlier that he had already marked ballots for them and sent them to the regional authorities.
Warped Myanmar Economy Slows Aid
YANGON, Myanmar — An S.U.V. for $250,000 andacellular phone for $3,000. As foreign aid workers test Myanmar’s commitment to allow them to operate inside the country as part of the relief effort for Cyclone Nargis they face not only administrative hurdles erected byaxenophobic military government but an economy warped by years of misrule.
Myanmar’s military limits the sale of mobile phones, bans satellite phones, sharply restricts car imports and rations gasoline to one or two gallonsaday. The main beneficiaries of this system are government employees and military officers, who profit by selling permits, gasoline and many other items on the black market.
Aid workers from the United Nations and private relief agencies continued Wednesday to travel into the Irrawaddy Delta, the area hardest hit by the May3cyclone, following an agreement reached last week with the Myanmar government.
Richard Horsey, the spokesman for the United Nations relief effort, said the military was requiring aid workers to give 48 hours’ notice before traveling into the delta but that he was hearing only positive news about their access.
By the government’s count, the storm left 134,000 people dead or missing, and the United Nations estimates that 2.4 million survivors face hunger and homelessness. Yet as the number of aid workers increases, Myanmar’s capacity and willingness to accommodate their needs are likely to be stretched.
“I assume we will be running out of quitealot of things when the influx comes,” said Hakan Tongul, deputy country director in Yangon of the World Food Program,aUnited Nations agency delivering supplies to the victims of the storm. “There will be logistical problems for sure.”
In the days after the storm, the World Food Program asked for permission to import six vehicles, Mr. Tongul said. “We haven’t heard anything from the government.”
To the outside world, the government’s torpor in reacting to the cyclone has come across as callous indifference. But dysfunction has also beenafactor. Whenadomestic Myanmar Airways passenger plane crashed in 1999 only three miles from the airport in Tachileik, near the border with Laos and Thailand, it took the authorities five days to locate the wreckage.
“Passengers who might have been saved all perished,” saidafrustrated Myanmar government official in Yangon who requested that his name be withheld because talking toaforeign reporter could cause him to lose his job or worse.
“The same thing is happening now,” the official said, referring to the cyclone. “We don’t have the infrastructure for the kind of rescue work we need in times like this. In this country, where everything moves through the military chain of command, no government official takes the initiative.”
China, Sri Lanka, Indonesia and other countries struck in recent years by natural disasters have varying degrees of political restrictions. But they all allow something Myanmar has lacked for the past 46 years under military rule: the right to do business.
The economy is highly inefficient. Electricity — even in most parts of the commercial capital, Yangon — is available just five or six hoursaday. To ride inataxi in Yangon meansarickety journey on 20-year-old shock absorbers.
A company in India, Myanmar’s neighbor to the west, is preparing to roll outa$2,500 car onto the commercial market. To the east, Thailand exports halfamillion pickups. But those fortunate enough to ownacar in Myanmar are often stuck withaleaking jalopy. The government allows onlyafew thousand cars to be imported each year, many fewer than are needed inacountry with nearly 50 million people. Import restrictions have skewed the prices of used cars to levels that would be considered absurd in neighboring countries: A 1986 Toyota Chaser,amodel the company stopped selling eight years ago, sells here for $16,000.
In sucharestrictive environment, the black market thrives. Rationed gasoline, which goes for $250agallon, sells for at least twice that at the roadside bamboo shacks that serve as illegal but tolerated gasoline stations. The military, which has easier access to cheap gas, is one of the largest sellers, say drivers who regularly fill up with the illegal fuel.
Government officials and military officers also make money from reselling mobile telephone numbers and car and motorcycle registration documents, all of which are very difficult to obtain.
The Myanmar official who spoke on condition of anonymity gets $120amonth for his official salary, but that hardly meets his needs. “Everyone must findaway to survive,” he said. The police collect bribes at checkpoints from truck drivers. At airports, pilots and ground crews split the extra-luggage surcharges from passengers. “Everyone is doing it,” the official said. “If you don’t or can’t, you are doomed.”
“Do you see the car out there?” the Myanmar official said, pointing toaused Japanese S.U.V. parked outsidearestaurant. “It will probably cost $50,000 to import that car. But it’s sold here for $250,000. The $200,000 balance is for all kinds of government permits.”
The going rate foramobile phone on Yangon’s black market is $2,500 to $3,000.
The government also makes money by doing business with the United Nations. Each United Nations agency was allowed to buy 10 mobile phone numbers — at $1,500 each, according to Mr. Tongul. In Thailand, by contrast, mobile phone numbers are sometimes given away by companies that count on making their money back on usage of the phone.
A Chinese-made motorcycle in the northern city of Mandalay costs $300 but sells for around $1,000 when the black-market registration is included.
Canada urges UN council
Steven Edwards, Canwest News Service Published: Wednesday, May 28, 2008
UNITED NATIONS - Canada demandedatougher international response yesterday to countries that block humanitarian aid, telling the UN Security Council they should be punished.
Describing the situation in Burma asa"matter of life and death," John McNee, the Canadian ambassador to the UN, said the body has the power under international law to act, but getting help to where it's needed "remains an elusive goal."
"Those who refuse access cannot be allowed to act with impunity," he said. "Enhanced accountability, underscored byaclear demonstration by the council that systematic denial of access will not be tolerated, is more important than ever."
Mr. McNee spoke at an "open" Security Council debate on the protection of civilians in armed conflict.
Canada's stance serves asachallenge not only to the council's 15 members, but also to itself should Ottawa winaseat on the UN's most powerful body in coming years. States such as Burma get away with defying the security council principally because China and Russia, two of the five permanent members with veto power, traditionally oppose UN-ordered intervention without the consent of the target state.
It was not clear what Canada would do to persuade offending countries to change their ways, other than emphasizing the immorality of letting people die. "Member states haveacollective interest in ensuring safe and unhindered humanitarian access to civilians in need," Mr. McNee said.
"This is not simply an aspirational statement; it isafundamental principle of international humanitarian action."
Everything I do,I do it for you,
Promises don't come easy,
take me to your heart ,
Mouse love rice,